FAAHFAAHIN: Xogta ku saabsan Kiiska Dhimashada qofka Corone-Virus looga shakiyey ee Garoowe.
March 28, 2020 NEWS 3
GAROOWE(P-TIMES)- Qof looga shakiyey Caabuqa Corone-Virus, ayaa galabtay ku geeriyooday magaalada Garoowe ee caasumada Puntland, gaar ahaana Xarunta Karantiilka ee dadkan loogu talogalay, markii la geeyey sida ay xaqiijinayaan laamaha Caafimaadka.
Saraakiisha Caafimaadka ee Xarunta Bad-qabka (Karantiilka) dadka looga shakisan yahay Corone-Virus ayaa xaqiijiyey in ruuxa geeriyooday galabtay uu ku dhex-dhintay xarunta, markii la keenayba uu ku jiray marxalad adag, isagoo loo shaqeynayo uu dhintay.
Waxay ii sheegeen khuburada caafimaadku, in 20 daqiiqo kahor dhimashadiisa la keenay xarunta Karantiilka isagoo nool, ay qoreen in uu magaalada Garoowe joogay 7 maalmood wax kayar, kana yimi dalka Itoobiya, laakiin ma aysan sheegin kahor halka uu ka yimi.
Calaamadaha ama Astaamaha uu laha waxay ku sheegeen Qandho saaid ah, Shuban daran, Naqaska oo qabanayey, markii lagu xiray qalabka Naqaskana uu geeriyooday-ba, Da’a ahaan waxay ku sheegeen 45 sanno ilaa 50 sanno jir.
Baaritaanadiisa ayaa loo diyaarinayaa Sheybaarka WHO ee dalka Kenya, halkaas oo iyana lagu soo kala cadeyn doono kiisaska hadda ku jira xarunta Karantiilka ee magaalada Garoowe.
Dawladda Puntland wali ma aysan soo saarin wax xog ah oo dhacdadan ku saabsan.
Rw hore ee somalia waa noolyahay,maxa usoo qorteen wax aan la hubin fudeedka iska dhaafa
ninki ugu horeyey ee aad dhahdeem groe ayaa lagu karantilay oo covid19 ayu qabaa WAA BEEN WAXA UU QABAA CUDURKA SOMALIDU U TAQAAN NEEFTA.neeftuna dadka naqaska way ku dhajisaa.fadlan fudaydka dhaafa.war aad hubtaan soo gudbiya please
Ahmed cabdiweli says:
Fadlan putland times bulshada way dhaga taagayaan walalayaal war aad hubsan bulshada labadaada markaa walalayaal waad mahadsantihiin inaad war uun aad nala wadaagteen mahadsanidiin